९ वर्षको बच्चाको मुखभित्र ३ सय दाँत ! - Arthatantra.com
९ वर्षको बच्चाको मुखभित्र ३ सय दाँत !
काठमाण्डौं । वयस्क मानिसका अधिकतम ३२ वटा दाँत हुन्छन् । तर यहाँ त वयस्क होइन, ९ वर्षको बच्चाको नै ३ सय वटा दाँत पलाएका छन् । फिलिपिन्सका जोन क्रिस नामका ९ वर्षीय बालक दुनियाका यस्ता दुर्लभ बालक हुन् जसलाई लागेको रोग यो संसारमा केवल ४ प्रतिशत मात्र मानिसलाई मात्र लागेको छ ।
हाइपरडोन्सिया नामक रोगका कारण उनको मुखभित्र असामान्य रुपमा धेरै दाँत पलाइरहेका छन् । मुखभित्र भटाभट दाँत पलाउने यो बिमारीले उनलाई असह्य पीडा दिएको छ । बोल्न तथा खानेकुरा खान पनि ठूलै कष्ट बेहोर्नुपर्छ ।
सानो छँदा उनको मुख सबै सामान्य थियो । उनका २० वटा दाँत पलाएका थिए । तर उनका दाँतको संख्या विस्तारै बढेर ५० पुग्यो । त्यसपछि एक्सरे गर्दा त उनको मुखभित्र दाँतको संख्या डेढ सय पुगिसकेको पत्ता लाग्यो ।
उनको दाँत पलाउने क्रम रोकिएन र केही वर्षमै उनको मुखभित्र ३ सय वटा दाँत पलाइभ्याए ।
जोन नियमित उपचार तथा शल्यक्रियाबाट गुग्रिरहेका छन् । विस्तारै विस्तारै शल्यक्रिया गरी उनका दाँत निकालिँदै छ । अहिलेसम्म उनका ४० दाँत निकालिसकिएको छ । अझै ७ वटा अप्रेशन गरेर उनका बढि भएका दाँत निकालिने योजना छ ।
वि.सं.२०७२ चैत ५ शुक्रवार १६:५३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे टानका अध्यक्ष रिजाल पनि प्रधानमन्त्री भ्रमण टाेलीमा
पछिल्लाे अब घरपालुवा कुकुरको दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने